Amakhamera Womzimba Wamaphoyisa Ubumfihlo | Izixazululo ze-OMG
Ngenkathi amaphoyisa e-US ebhekwa ngokucophelela ngabahlali abasebenza kuwo, amahhovisi amaningi abamba amakhamera angagqokile ukubika ukusebenzisana kwawo nabantu bebonke. Amaphoyisa nezishoshovu zamalungelo ezifanayo ezazithembe izehlakalo ezenzeka ekubukeni zizosiza ukudicilela phansi ubudlova kubaphathi njengoba nje nokwanda kwendlela amaphoyisa enza ngayo abaphathi. Noma ngabe kunjani, umbiko okhishelwe kuleli sonto lamanje ubheka ukuthi mangakanani amahhovisi afunela umthetho ukuthi avulelekile maqondana nokusetshenziswa kwamakhamera — nokuqoshwa akuqoqayo.
Umphumela Wamakhamera Womzimba Kubantu kanye Nobugebengu Bobugebengu:
Ikhadi lesikhadi eligqokwe kakhulu emzimbeni elisanda kwedlula eliphuma kwi-The Leadership Conference on Civil and Human Rights, lisebenza nenkampani entsha yokweluleka i-Upturn, lihlole amahhovisi wamaphoyisa angama-50 ase-United States lawaveza egula engxenyeni enkulu yemigomo eyisishiyagalombili yokuhlolwa. Lezi zilinganiso zifaka phakathi ukuthi amaphoyisa akuqinisekisa kanjani ukuvikelwa kwalabo abarekhodayo, kungakhathalekile ukuthi izikhulu zivunyelwe yini ukucwaninga ifilimu ngaphambi kokubhala imibiko yazo, lokho kuqoshwa kugcinwa kangakanani nokuthi abantu abavamile bayayibona ifilimu ababonakala kuyo. Izinhlangano ezahlukahlukene zokulingana kwezenhlalo, abagqugquzeli bezokuphepha kanye nemithombo yezindaba yakha imibandela ngoMeyi 2015 ukuze ibe nomthelela ekutheni amahhovisi enza kanjani futhi asebenzise le ndlela entsha.
Akukho neyodwa imikhakha ethola ibanga lokuphasa kuwo wonke amakilasi. Iqiniso lingatshelwa abali-13 kuphela abadlulile emarshal ezindaweni eziningi, ngokusho kukaWade Henderson, umongameli kanye ne-CEO yeThe Leadership Conference, umhlangano wezambulela wenkululeko owahlelwa ngo-1950 ukukhuluma nezinhlangano ezahlukahlukene okubalwa kuzo i-NAACP ne-ACLU. Amahhovisi amaphoyisa aseFerguson, Mo., naseFresno, eCalif., Abakunakanga ukufeza noma yiziphi izindlela. UFerguson wadonsela ukunakekelwa komhlaba eminyakeni emibili eyedlule lapho amaphoyisa lapho abulala khona ngenhlamvu umfana wase-Afrika waseMelika uMichael Brown owayengahlomile, okwenza ukuba izwe lonke lixoxe ngendlela okugunyazwa ngayo umthetho ukuphatha abantu abancane.
Ukukhathazeka ngokusetshenziswa kwamakhamera womzimba:
Amaqembu elungelo lomphakathi futhi akhathazekile ukuthi izinhlelo zebhayometrikhi ezinamandla okuvuma ebusweni zingasetshenziswa ukuhlukanisa abantu kwifilimu yekhamera, futhi amakhamera womnyango wamakhadi wamaphuzu ayisishiyagalombili asondela kuncike ekutheni bafuna amaphuzu okwephula ukusetshenziswa kwe-biometric. Ukuqamba okulindeleke ukuthi kusheshe kubonwe abantu kwikhamera kudinga inhlanganisela yokuphatha amandla, ukubalwa nempilo yebhethri yekhamera engakabi khona — nokho lokho kungashintsha ngokushesha njengoba iTaser International kanye nabanye abadali bamakhamera omzimba bekhulisa amandla okuchitha bukhoma. Ngaphezu kwalokho, ukuvunywa kobuso bezithombe ezisuselwe kude njengamanje.
Izinhlangano ezilwela amalungelo omphakathi zesaba amaphoyisa zizosebenzisa amakhamera njengezinto zokusula lapho zibuka izindawo ezincane, kusho uHenderson enkulumweni yomphakathi. Amahhovisi ambalwa asabele kulezi zinkathazo ngokuphoqa imihlahlandlela yokuphoqa ukuchitheka kobuso obusha- ngaphambi kokuba kufinyeleleke. UMnyango Wezamaphoyisa waseBaltimore yiwo wodwa onyakeni owedlule wekhadi lesikweletu leNkomfa Yezobuholi iqhinga lalo njengamanje eliphoqa ukuseshwa kwe-biometric kwefilimu. Ikhadi lesikhangiso lakamuva kakhulu leNgqungquthela likhombisa ukuthi amaphoyisa aseBaltimore County, Boston, Cincinnati, Montgomery County, Md., NaseParker, eColo., Nayo yonke eminye imikhawulo ye-biometrics nayo.
"Ukusetshenziswa kwe-biometrics kuzoba yinkinga enkulu-hhayi esikhathini esizayo esisekude kakhulu," kusho uJames Coldren, owengamele umphathi wezinhlelo zokulingana eCNA Institute for Public Research, okuyinhlangano engenzi nzuzo yocwaningo nophenyo. “Ifana nanoma yini enye. I-biometrics ingenza izingqinamba uma ingalawulwa noma ihlolwe futhi abantu abanezinhloso ezimbi bayisebenzisa ngaleyo ndlela. ” UColdren noWilliam Sousa, inhloko yeCentre for Crime and Justice Policy eNyuvesi yaseNevada, eLas Vegas, baqhuba uphenyo lohlelo lokuhlolwa kwamakhamera olugqoke umzimba olwenziwe ngamakhamera aseLas Vegas Metropolitan. Babengazibandakanyi nocwaningo lweNkomfa Yezobuholi kodwa batholile ngokuhlola kwabo ukuthi, ngemuva kokuvinjelwa okuthile, amahhovisi amaphoyisa amema amakhamera agqoke umzimba. "[ELas Vegas] uphiko luthole ukuthi okuqoshiwe kuyasiza kwabathembekile nabesabekayo kwababophezelekile," kusho uColdren.
Ngaphandle kokuthi sekuseduze kangakanani, izingqinamba ezahlukahlukene ziyacindezela kune-biometric, kusho uMichael White, uthisha wobulelesi e-Arizona State University ohlole amakhamera agqoke umzimba we-US Branch of Justice (DoJ). "Ngizwe ingxoxo ethile mayelana nokusetshenziswa okungaba khona kwe-biometrics kodwa angazi ukuthi yiziphi izinhlangano ezihamba ngokushesha zibheke kuleyo ndlela okwamanje." Ezinhlelweni ezigxilwe yiNgqungquthela Yobuholi, enkulu kunazo zonke ifaka phakathi lapho izikhulu ziqopha nokuthi zikuthola kanjani ukuvikeleka kwezihloko — ikakhulukazi lezo zokwenza kabi ezixhaphaza abantu. Ukukhathazeka okunjalo kwezokuphepha kuvele njengoba amahhovisi athile enza iziteshi ze-YouTube ukuze ziqoshwe.
Ukukhathazeka mayelana nokuxhaswa ngamakhamera:
Izigaba eziningi zibhekisa ezindlekweni njengesithiyo ekusebenziseni okusha. Amakhamera ngokwawo anganweba ngezindleko kusuka ku- $ 300 kuye ku- $ 800 ngesikhulu ngasinye, ngenani elikhulu lamadola elichithwe ngokuqhubekayo ukugcinwa kwamavidiyo inyanga nenyanga ngemuva kwesikhathi esithile. Izindleko akunzima neze ukuzithola: okokusebenza, ukulungiselela nolwazi lokugcina imininingwane. Izimali zokutshala imali, ngokwesibonelo, zinciphise izimangalo noma ubudlelwano obuncane be-petulant network, noma ngabe kungenzeka kanjani, akulula konke ukukuhlola, kusho uWhite, ophethe ngokubambisana eqenjini eliqeqesha futhi lisize ukuhlanganiswa kwamahhovisi okugunyazwa komthetho onamaphrojekthi wekhamera zixhaswe yi-DoJ's Bureau of Justice Assistance (BJA) Pilot Implementation Program. Kodwa-ke, uWhite ucabanga ukuthi mhlawumbe ingxenye ethile yezindleko izolinganiswa. "Amanye amahhovisi amakhulu amaphoyisa akhokha njalo ama- $ 10 okungenani izigidi eziyizigidi ngonyaka uma kwenzeka," esho. "Uma kwenzeka amakhamera agqokwe ngumzimba anciphisa leso sibalo, lokho kuyinto enhle kakhulu."
I-BJA isebenzisa ikhadi layo lokuhlola ukuthola izindlela zekhamera yomnyango zisebenzisa izibopho ze-17 zokuhlinzekela uxhaso, kufaka phakathi ukuthi ngabe izikhulu zitshelwa nini lapho zidinga ukuqondisa amakhamera omzimba wazo nokuthi zilanda kanjani ngokuphepha ukuqoshwa kuma-PC asehhovisi. Kunesizathu esizwakalayo sokuthi la malungiselelo amukela lolu phenyo: I-BJA isichithile ngokusemthethweni imali engaphezu kwezigidi ezingama- $ 19 kumahhovisi e-73 esizweni sonke ukuthenga izinhlaka zekhamera ezingagugi.
Amakhamera Womzimba Wamaphoyisa Nobumfihlo igcine ukuguqulwa: Septhemba 26th, 2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-3737 Ukubuka kwe-3 Namuhla